Su'aalaha La Weydiiyo | FELVIK baarkooda Co., Ltd.
Waxaan damaanad qaadeynaa in dhammaan FELVIK MINK LASHES laga sameeyay 100% mink dhogor.
Dhogorta Mink waxay u egtahay mid dabiici ah oo aad uga jilicsan fiilooyinka la soo saaray. Marka loo fiirsho jeedal timaha aadanaha, jeedalyada Mink waxay leeyihiin talooyin dabiici ah iyo curlsyo aad u qurux badan.
100% Xadgudub-Bilaash ah?
FELVIK wuxuu cadeynayaa inaan ka soo horjeedno naxariis darada xayawaan kasta!
Minks waxay daadinayaan timaha wakhti cayiman.shaqaaluhu waxay soo ururiyaan dhogorta waqtiga caadiga ah Markaa gebi ahaanba waa loo baahnayn in la waxyeeleeyo xayawaannada jecel. Dhammaan alaabteenna FELVIK MINK jeedalku waa 100% naxariis la’aan!
Nadaafadda Karbaashka Mink
J: Dhamaan dhogorta mink waa in lagu buuxiyaa baro biyo nadiif ah saafi ah saacado badan si loo nadiifiyo.
B: ka dibna mari hannaanka heerkulka sare ee heerkulka sare ee 300 si loo dilo inta badan dhagaxyada.
J: Kahor intaadan isticmaalin faashadda, dhogorta mink waxaa la hoos geyn doonaa ledska Ultraviolet si jeermiska looga dhigo.
Dhammaan jeedallada dhogorta mink ayaa dib loogu celin doonaa baakadihii hore si ay nadiif u ahaadaan.
Baarkooda Felvik ma la isticmaali karaa?
Jeedal dhogorta FELVIK Mink ah ayaa la gashan karaa ilaa 25 jeer haddii si taxaddar leh loo daryeelo. Qaabka iyo qaloocyada jeedalku sideedii bay ahaanayaan xitaa tobaneeyo jeer ka dib.
Miisaanka dabiiciga ah & Fudud?
FELVIK Mink Lashes waxay leeyihiin suuf aad u khafiif ah oo fudfudud ah Fududyada ayaa ah kuwo aad u fudud, jilicsan, dabiici ah oo dabacsan, taas oo kuu oggolaaneysa inaad u xoqdo sida jeedalkaaga oo kale
Kooxda khafiifka ah iyo kuwa jilicsan ee dhacda mink ayaa ah qalooca sida qaabka indhaha, xitaa ka dib marka la isticmaalo dhowr jeer. Waxay ka dhigeysaa isticmaalka jeedalku mid aad u fudud!
SIDOO KALE WAAD KA WELWELI KARTAA:
1.FAN FELVIK LASHES ma habeyn karaa baarkooda?
J: Haa, FELVIK LASHES wuxuu habeeya MINK LASHES, 3D MINK LASHES, FOX IYO MINK LASHES LASHES, HORSE HAIR LSAHES sida ku xusan codsiyada macaamiisha.Waxaan ka dhigi doonaa jeedalladaada mid gaar ah oo gaar ah si aad ula tartami karto noocyada kale ee caanka ah.
Fadlan ogow: u habeeyso baarkooda codsi MOQ 500pairs.
2.FAN FELVIK LASHES ma habeyn karaa xirmooyinka baarkooda?
J: Haa, waxaan bixinaa qaabab kala duwan oo ah baakado laash ah oo leh cabbirro kala duwan.
Dhab ahaantii, waxaan sidoo kale ku daabacan karnaa astaantaada xirmooyinka.
Macaamiisha waxay ubaahanyihiin inay kubixiyaan LOGO ama naqshadeynta baakada lakabka ee .AI ama .PDF jaantusyada vektorka.ONLY .AI iyo .PDF faylasha ayaa loo isticmaali karaa daabacaadda.